दुबईमा २०० जना डेलिभरी बोयमा रोजगारको अबसर, अन्य सेवा सुबिधाहरु के कति हुने ? - jagritikhabar.com
यु.ए.ई.को बहुप्रतिष्ठित कम्पनि Only Click Delivery Services llc UAE मा नेपाली पुरुष कामदारको माग गरेको छ । Only Click Delivery Services llc UAE कम्पनीले डेलिभरी बोय पोस्टका लागि २०० जना नेपाली कामदारको माग गरेको हो ।
न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ । कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ । करार अवधि २ वर्षे रहेको छ । न्यूनतम तलब नेपाली रु. ३२,३२०/- रहने कम्पनीको डिमाण्ड लेटर मा उल्लेखित छ ।
तलब खान बस्न सहित ३२ हजार माथि रहेको छ । इच्छुक कामदारले ब्लु ओसिएन रिक्रुटमेन्ट प्रा. लि. को कार्यालय नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ मा मंसिर ०३ गते सम्म अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ ।